Hababka Ugu Sahlan Ee Aad Lamaanahaaga Jaceyl Qalbiga Taabto Ugu Abuuri Kartid Sida.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Hababka Ugu Sahlan Ee Aad Lamaanahaaga Jaceyl Qalbiga Taabto Ugu Abuuri Kartid Sida..
Published: September 13, 2016, 2:00 pm
(0) Comments Inbadan ayeey dumarka is weeydiiyaan side ku kasban karaaa quluubta ninkeyga in badan ayey ragana is weeydiiyaan side ku kasban karaa quluubta xaaskeyga, runtii wax sahal ah maahan in aad dhex degto quluubta lamaanahaaga, hadana waxaan ku leeyahay waa sahal hadii aadan adiga cusleysan.
Ma ogtahay Wax kasto oo fudud hadaad cusleysato waa kugu cuslaanayaaan, waxkasto oo culusna hadad fududeysato waa kuu fududaanayaan si kastooy u culusyihiin, shabakada kobciyemedia.com waxey ku leedahay marka ogoow wax weliba iney yihiin sidaad adiga kadhigato.
Halkan waxaan kuugu sooo gudbinayaa qodobo gaaban oo hadaad joogteysato aaad ku kasban karto quluubta lamaanahaaga.
Xusuusnoow qodobadaan waxey katurjumayaan lamaanaha is qabo oo maahan dad jeceyl jilayo, waayo lamaanaha is qabo waxaa u banaan wax aan u banaaneyn lamaanaha jaceylka jilayo, sidaa awgeed fariimaha qaar aan soo gudbino xusuusnow waxey qaas Ãƒâ€šÃ‚Â u yihiin lamaanaha is qabo halka fariimaha kale aay kawada simanyihiin lamaanaha is qabo iyo kuwa xiliga jaceylka dhex maquuranayo.
Ninyahow ama gabaryahay ugu horeyn waxaan kuusheegayaaa jaceylkaaga iyo sidaad usoo bandhigeysid in aay hal si keliya aay dhab kunoqon karto kuuna rumoobi karto waana inaad tahay qof kalsooni isku qabo oo daacad ah aaminsan in lamaanihiisa uu qalbiga kadegi karo, balse hadaadan kalsooni isku qabin daacadne aay kaa aheyn keliya aad dooneysid inaad qalbigaas hanato ebid sida dhabta ah ma u hanan doontid.
Lamaahaaga waxaad dareensiisaa xili walbo inaad garab taagantahay oo aad horumar ladooneysid weligaa waxaad kacarartaa in uu lamaanahaaga kaa dareemo inaadan horumar u rabin, dumarka qaar ayaaa waxey aaminsanyihiin ninka oo lacag yeesho ama horumaro iney sababto in uu naag kale raadiyo, runtii aniga waxaan aaminsanahay naag weliba haduu ninkeeda naag kale raadiyo waa ayada oo aan kazoo bixin xaqii raaliyanimada.
Nin weliba oo arko in aay xaaskiisa dhaliil usoo jeedineyso waxa ugu horeeyo aay kawaaysay ayaa ah in uu ayada lee u dhago nuglaado, dumarka oo sheekadooda ladhageysto lagu raaco aan lakhilaafin waxey ku beertaa kalsooni mida u sareyso sidaa aay awgeed hadii aad dhaliil ka carareyso xaaskaaga maalintiiba dhowr mar dhageyso hadalkey ku leedahay kuna raac adigaa wax badan dareemi dooono.
Waxaad xusuusnaataa hadii aad tahay qof lamaanihiisa si dhab ah u jeceyl uma baahnid tallooyin faro badan in aad raadsato keliya waxaa talooyinka aad ku dhaqmeysid kaheli kartaa lamaanahaaga, waayo hadii qof kale tallooyin kusoo siiyo, tallooyinkaasna lamaanahaaga aaysan jecleysan qofka kusoo siiyayna aay lamaanihiisa ku qaboobeysay waa dhib waayo bini aadamka isku mid maahan.
Marka waxaan kugula talinayaaa ugu horeyn inaad barato dhaqamada lamaanahaaga, halkaas ayey kaaga bixi doonaan tallooyin faro badan oo aad kaga maarmi doonto, inaad karaadiso meel kale.
Waayahay dhaqamada lamaanaheyga aan bartee sida ugu fudud aan ku baran karo waa sideee, durbo waa suaalaha aay maskaxdaada is weeydiineyso inaad si dhab ah oo biyo kama dhibcaan ah ubarato dhaqamada lamaanahaaga runtii aad bey u fududahay haduu ALLE idmo maqaal u qaas ah ayaan soo qori doonnaa kaasoo kuu sahli doono sida ugu fudud aad kubaran karto dhaqamada lamaanahaaga.
W/Q Ibrahim Ali Abdi ‘Kalafoge’
« Warbixinta Ka HoreysayTalaagad Awood U Leh Inay Garato Waxyaalaha Gudaha Ugu Jira Oo La soo Saaray..	Warbixinta Xigto »Gorogor Xaflad Aroos Mas Ku Soo Riday Iyo Sababta Rasmiga ah Ee Arrintaasi Ka Danbeysay..	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Comments are closed.